Isithonjana sendawo yokusebenzisa isiza ye-Escalator 5
Umugqa wokukhiqizwa kwendwangu we-1.2m oncibilikisiwe
I-1.6m encibilikisa indwangu yokukhiqiza indwangu
Isisabalalisi sekhanda eliphakeme
Uhlaka lokusekela i-Escalator
Iphaneli yokuhlangana yamacala omabili ohlangothini
Umugqa wethala lomhlangano we-Escalator
Isingeniso se-Genera * Lo mzila wokukhiqiza uqukethe isigaxa esisodwa sokukhipha, isicibilikisi se-extrusion encibilikisiwe, ibhande lokudlulisela, umshini wokuhambisa umoya njll. * Kugcwele okuzenzakalelayo kusuka ekuphakelweni kwezinto ezibonakalayo kuya ekuqothulweni kwendwangu kokugcina okuncibilikile, ubuchwepheshe obuvuthiwe, ukugijima okuzinzile, i-PFE ingafinyelela ku-95 nangaphezulu. * Umthamo wokukhiqiza usuka ku-1500kg, ubungako ngqo bokukhiqizwa buxhomeke kumshini we-extruder nosayizi wokuncibilikiswa komoya oncibilikisiwe. Ipharamitha Yezobuchwepheshe 1.Model: HL-1600 2. Uhlobo Lokukhiqizwa: Vertical Blow Downward 3.Voltag ...
Imijovo eqondile eyenziwe ngokwezifiso nokubuyisela imigqa yokukhiqiza ye-meltblown kumakhasimende anokubekiwe okusukela ku-400mm-1600mm. Umugqa wokukhiqizwa ophindaphindwayo angeke usetshenziselwe ukukhiqiza izindwangu ze-meltblown kuphela, kepha futhi wokwenza izinto zokuhlunga uketshezi nezinto zokuhlunga umoya. Izinto zokuhlunga ze-Liquid zisetshenziselwa kakhulu emkhakheni wezokwelapha ngamanzi, embonini kaphethiloli neyamakhemikhali, ngesakhiwo esifanayo, ukunemba okuphezulu kokufayeka, umphumela osobala, kanye ne-po eqinile ...
Imishini yokusiza eyinhloko yomugqa wokukhiqiza nowokufafaza yindawo yokubasa yokuhlanza ikhanda. Ngemuva kokukhiqiza isikhathi esithile, ukungcola kokuxovulwa kwemgodi kuzokwenzeka. Ngalesi sikhathi, kuyadingeka ukufaka esikhundleni sokujova okuncibilikisiwe kufa. Inhloko yokufa yomjovo wokufakelwa idinga ukuxoshwa ukuze kususwe i-polymer esele nokungcola ekhanda lokufa. Isikulufa kanye ne-spinneret kuvame ukugazanyiswa ukuze kususwe ama-polymer asele nokungcola. Futhi izinto ezingavuthiwe ze-melt -...
Umugqa wokukhiqizwa kwendwangu ongu-400-600 melt-blown
Uhlelo lokulawula ukusebenzisa i-Escalator
Umsebenzi wokulawulwa kukagesi Kunezindlela ezimbili. Imodeli yokuqala imodeli ejwayelekile, futhi imodi yesibili imodi yokulungisa. Imodi ejwayelekile lapho kufakwa wonke ama-plugs angenakulungiswa egumbini elingaphezulu nangaphansi komshini. I-escalator iqala ukuthenga abasebenzi ngokhiye uma kungekho muntu kuyo. Abasebenzi bacindezela inkinobho yokumisa ukumisa i-escalator. Lapho isiginali yokhiye ithola, iyaqala futhi isebenza ngejubane elilinganisiwe. Khipha elinye lamapulagi angenakulungiswa bese ufaka ibhokisi lokulungisa ...
Isithonjana sokuhlaziya indawo yomhlangano we-Escalator 1
Isithombe se-Escalator sisebenzisa indawo yesithombe 3
Isithombe se-Escalator sisebenzisa indawo yesine
I-Working Principle Escalator luhlobo lwemishini eqhubekayo egijimayo ebunjwe ngesixhumo se-chain sakhiwo esikhethekile nesendlulisela ngebhande lesakhiwo esikhethekile. Inezinzuzo eziningi ezifana nomthamo omkhulu wezinto zokuhamba, izisebenzi zokuhamba ngokuqhubekayo. Ngakho-ke isidingo sokuphepha siphakeme kunenye imishini. Isetshenziswa ikakhulukazi ezindaweni zomphakathi ezinokugeleza kwabantu okugxile, njengezitolo ezinkulu zezitolo, amakilabhu, iziteshi, izinkundla zezindiza kanye nama-wharfs. Ukwakha Idrayivu enkulu inokwenele ...